Dzimwe nguva ndinozviita kuseka! | Martech Zone
Dzimwe nguva ndinozviita kuseka!
Svondo, Gunyana 3, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndinofanira kukuudzai vanhu… ndinofunga zvangu last post yakanga iri yekunakidzwa kwandakambo nyora. Sezvo iwe fanira ona nemufananidzo wangu mumusoro, ini kashoma kuzvitora zvakanyanya. Zvakare, munguva yakapfuura ndakanyora zvakati wandei nezve izvo zvandinofunga nezve kuyera kubudirira kwako pane zvinotaurwa nevamwe vanhu nezvako. Kubudirira kweBlog hakugone kuyerwa kunze, chete newe!
Nezvo, ndinofanira kubvuma kuti ndakakubatai mose. Ini ndaida kuona maitiro evaverengi vangu… uye iyo blogosphere ... pandakanyora zita rangu rinotyisa iro rakanzvengwa 'blog yangu iri nani pane yako blog'. Rwaive rurimi zvachose mudama, asi ini ndaifanirwa kuona maitiro. Zvaive zvakanakisa! (Ndokumbirawo… Ndinovimbisa kuti ndiri kuseka newe, kwete iwe!). Vamwe vanhu vakanzwa zvakashata kwandiri, vamwe vakanwiwa kwandiri, vamwe ndokufananidza chiyero chavo neyangu chiyero, uye vamwe vakaratidza kuti chinzvimbo hachinei nechekuita neblog yakanaka.
Ini ndinoda kuve ndakangwara dzimwe nguva kuona kuti maitiro ari… kumutsa hari sezvavanotaura. Zvichida chikamu chinonakidza cheichi (ndinovimba handisini ndoga ndinoseka), ndechekuti kufarirwa kweiyi yekupinda kwakandisimudzira kusvika ku # 70,178 munzvimbo yeTechnorati.
Saka, semushambadzi, ndinofunga inonongedzera kuzvinhu zviviri.
Chris Baggott akambondiudza kuti dzimwe nguva zvakanaka kuve pakati pekupokana uye kumutsa mhinduro kunogona kubatsira zvachose mukufamba kwenguva nezano rekambani. Iye haareve kukanganisa ... anongoreva kuti zvinounza iwo mukana wekuratidzira zvinhu zvako. Mumuenzaniso uyu, ndinofungidzira kuti wakashanda!
Dzimwe nguva kungo tarisa kuti iwe wakakosha kupfuura zvauri chaizvo kugona kushanda. Icho, pamwe, ichokwadi chinosuruvarisa kuti isu tinogona kugadziriswa nekutengesa. Ramba uchitaura kuti uri # 1 uye pamwe rimwe zuva iwe uchave!
Pamwe mumwedzi yakati wandei ndichaita kurwisa kwekunyepedzera uye ndoti ndeye # 1 blog paKushambadzira Automation uye uone kwazvinondiwana. Parizvino, zvakadaro, ndinongofara kuti handina kurasikirwa nemumwe wenyu nekupinda kwangu kwekupedzisira!
Yangu blog iri nani pane 99.86% yemamwe ese mablog.
Iyo Crocodile Hunter, Steve Irwin Akaurayiwa pazera makumi matatu nemana